Ihe niile ịchọrọ ịma gbasara kpakpando Taurus | Netwọk Mgbasa Ozi
E nwere ọtụtụ puku kpakpando na mbara igwe dum. Taa, anyị ga-ekwu maka otu ụyọkọ kpakpando nke zodiac nke ehi ma ọ bụ ehi na-anọchi anya ya. Ọ bụ ihe gbasara kpakpando Taurus. A pụrụ ịhụ kpakpando a n'ụzọ dị oke egwu na mbara igwe nke jupụtara na kpakpando ma dị nso na kpakpando nke Scorpio na Leo. Na mpaghara a ebe kpakpando a dị, anyị na-achọtakwa ụyọkọ kpakpando abụọ a maara nke ọma.
N’isiokwu a anyị ga-agwa gị ihe niile ịchọrọ ịma gbasara kpakpando Taurus.
1 Ebee ka ìgwè kpakpando Taurus dị?
3 Isi kpakpando nke kpakpando Taurus
4 Yọkọ na nebulae
5 Akụkọ banyere Taurus na ịgụ kpakpando
Ebee ka ìgwè kpakpando Taurus dị?
Ọ bụrụ na anyị chọrọ ịchọta ụyọkọ kpakpando a gafee mbara igwe, anyị ga-ebu ụzọ chọọ ụyọkọ kpakpando Aries. Igwe kpakpando a di na odida anyanwu ya na kpakpando Gemini di na owuwa anyanwu. Ọ bụrụ na anyị achọta kpakpando abụọ a, anyị nwere ike ịhụ na n’agbata oghere dị n’etiti otu na nke ọzọ bụ kpakpando Taurus.
Ya na ìgwè kpakpando nke Scorpio na Leo, ọ bụ otu n'ime ndị kasị ochie mara. Nye ndị Babịlọn bụ ụyọkọ kpakpando dị ezigbo mkpa ebe ọ bụ na mgbe anyanwụ gabigara kpakpando Taurus, ha malitere ịmalite kalenda ha. N'ebe ndịda nke kpakpando a, anyị nwere ike ịchọta Orion na ebe ugwu nke Perseus (njikọ).
Igwe kpakpando a na-aga site na mbara igwe. Ecuador nke galactic bụ onye na-ahụ ụzọ kewara Milky Way ụzọ abụọ. Na otu aka, anyi nwere igwe nke igwe na n’aka nke ozo anyi nwere elliptical. Nke a ma ọ bụ na-anọchite anya trajectory nke kpakpando ndị dị na mbara igwe.
Uzo ozo di na njiri mara kpakpando a bu na achoputara ya na uzo kpakpando abua mepere emepe ma di nso na mbara ala anyi. Clyọkọ kpakpando abụọ a nwere aha nke ha. Ha bụ Pleiades na Hiades. Anyị nwere ike iji otu binoculars ma ọ bụ telescope lelee kpakpando a. Maka ndị mbido anyị na-akwado telescopes nke nso Igwe mmiri. Ha dị mfe nghọta dịka a pụrụ ịhụ ha nke ọma na mbara igwe.
Isi kpakpando nke kpakpando Taurus
O bu kpakpando nwere otutu kpakpando, otutu na nebulae. N'inwe ụyọkọ kpakpando buru ibu, anyị ga-amarịrị otu esi amata ọdịiche ndị kachasị ewu ewu. Anyị ga-eme ndepụta nke kpakpando ndị kacha mara amara na njirimara ha:
Aldebaran: Ihe njiri mara ya bụ na ọ bụ kpakpando na-enwu gbaa na kpakpando niile. Ọ nwere agba n'etiti acha ọbara ọbara na oroma nke siri ike. Nke a bụ ihe na - eme ka ọ dị mfe nghọta. A na-esokarị ya na kpakpando ọzọ nwere ntakịrị nchapụta.
Alcione: ọ bụ kpakpando na-egbuke egbuke na ụyọkọ Pleiades. N'ime kpakpando niile n'ime ụyọkọ ahụ, ọ bụ ọdụdụ nwa.
Tauri, kpakpando abụọ: na-enweta aha a n'ihi na ileba anya mbụ ha nwere ike ịhụ dị ka a ga - asị na ha bụ kpakpando abụọ dị nso. N'ihi nke a, a na-akpọ ya kpakpando ọnụọgụ abụọ ma ha dị ọcha.
Tauri, kpakpando osisi nke gburugburu usoro: Site na aha ogologo a anyị na-ekwu maka ụdị kpakpando spectral A nke dị na mmalite nke mmalite. Kpakpando a sitere na ngwakọta nke hydrogen n'ime helium. Nmepụta kemịkal a n’otu ụzọ dị ka n’anyanwụ.
Yọkọ na nebulae
Ugbu a, anyị ga-ekwu maka ụyọkọ na nebulae nke kpakpando Taurus a nwere. Anyị ekwuola na mbụ na ọ nwere ụdị ụyọkọ abụọ: Pleiades na Hiades. Pleiades bụ otu kpakpando asaa dị na kpakpando a na ndị kacha nso na Earthwa. A na-ahụta ha dị ka ndị kachasị pụta ìhè na kpakpando niile na kpakpando a ma bụrụ agadi. Ihe a ma ama ha bụ na ha agbasawo n'akụkọ ihe mere eme ma bụrụ ndị a ma ama maka ịpụta n'ọtụtụ akụkọ na akụkọ ifo.
Hiades bụ ụyọkọ kpakpando ọzọ amata na nke kacha ochie na mbara igwe. A na-eme atụmatụ na ha gbara ihe dịka afọ 625 nde.
Nebulae, e nwekwara ụfọdụ n'ime kpakpando a. Onye mbu mara dika Crab Nebula. Ọ bụ nebula nke ndị ọzọ kpụrụ nke hapụrụ supernova. Achọpụtara ihe a maka ụfọdụ ndị Arab na ndị China na-agụ kpakpando n'afọ 1.054. N’etiti nebula a, anyị pụrụ ịhụ kpakpando abụọ mana ha anaghị enwu gbaa. N'ime ihe omumu nke emere iji ghota nke oma nke ihe omimi a, achoputara na o na eweputa oria electromagnetic siri ike.
Onye ọzọ nebulae nke kpakpando nke Taurus nwere ka a na-akpọ Ntughari Nebula. Ihe njiri mara ya bụ na o nwere agba acha anụnụ anụnụ yana ihe mejupụtara gas, iron, hydrogen, oxygen, silicon, carbon na stellar dust.
Akụkọ banyere Taurus na ịgụ kpakpando
Banyere kpakpando ndị dị na mbara igwe enwere ọtụtụ akụkọ ifo na akụkọ. Dị ka akụkọ ọdịnala ndị Gris si kwuo, Taurus na-anọchi anya minotaur. Nke a bụ ihe efu karịa Zeus ghọrọ oke ehi. Na akụkọ mgbe ochie, ekwuru na Zeus nwere ịhụnanya miri emi na Europe wee kpebie ịgbanwe onwe ya ka ọ bụrụ oke ehi mara mma ma dị nwayọ. Europe, mgbe ọ hụrụ ya, banye na ya ma Zeus jiri ohere ahụ nwee ike ịtọrọ ya ma mikpuo n'oké osimiri. Ọ bụ ebe ahụ ka ọ nwere ya ma ha mụta ụmụ nwoke 3 aha ya bụ Minos, Radamantis na Sarpedon.
Site na mgbe akụkọ mgbe ochie na-ekwu maka ịdị adị nke ụmụaka ndị a, ọ bụ mgbe Minos nọchiri anya ụyọkọ kpakpando Taurus. N'aka nke ọzọ, n'akụkọ ifo ndị Ijipt, a na-egosipụta kpakpando a dị ka chi Osiris na Isis. A na-anọchite anya chi abụọ a na ọkara oke ehi ọkara ehi.
Otu kpakpando a bu nke abuo na zodiac na onye ochichi ya bu ụwa venus. Ndị amụrụ n'okpuru akara Taurus na-enwe mmetụta ọsọ ọsọ karị. A na-ekwu na ha bụ ndị enwere ike ịtụkwasị obi kpamkpam ma bụrụkwa ezigbo ndị enyi na ndị hụrụ n'anya. Ha bu ndi nwere ndidi ma nwekwaa ikike nke aru na nke ọgụgụ isi.
Dịka ị pụrụ ịhụ, ụyọkọ kpakpando nke Taurus maara nke ọma n'ụwa niile. Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Astron » Taurus kpakpando
Igwe mmiri igwe Skywatcher